Chisingaperi Denga rakakura multiplatform nzvimbo yekurwira mutambo | Linux Vakapindwa muropa
Endless Sky ndeye 2D nzvimbo yekurwira mutambo yakafanana neyechinyakare kubva kuEscape Velocity akateedzana, mumutambo uyu tinofanira kuongorora dzimwe nyeredzi masisitimu uye tiwane mari kutaurirana, kutakura vafambi kana kupedza mamishini.
Iyo purofiti inogadzirwa inogona kushandiswa kutenga zvirinani kurwa chikepe kana kusimudzira zvombo nemainjini.
Uyewo zvinokwanisika kutora divi muhondo yevagari vemo, Irwa nevapambi kana musoro kune mamwe masisitimu uye tarisiro yekuwana vatorwa vane hushamwari vane tsika dzakapfuma kwazvo.
Mushure memakore ekushanda mufekitori, iwe wakazopedzisira wakachengeta mari inokwana kunyorera rezenisi rekutyaira uye kubhadhara pasi pane yako yekutanga starship.
Iyo kumashure yemvura nyika iwe yawakakurira pane inotengesa matatu chete mamodheru echikepe: chikepe, ngarava yekutakura, uye inopinza chiedza.
Zvichienderana nekuti ndeyipi yaunosarudza, iwe unozotanga kuita mari kutakura vafambi, uchitsvaga yakanaka bhizimusi madhiri, kana pamwe kuputika maasteroid kana kutora mabasa anoperekedza ekufambisa ngarava.
1 Maitiro ekuisa Endless Sky mutambo pane Debian, Ubuntu uye zvavanotora?
2 Maitiro ekuisa Endless Sky mutambo pane Fedora uye zvigadzirwa?
3 Maitiro ekuisa Endless Sky mutambo paArch Linux uye zvigadzirwa?
4 Maitiro ekuisa Endless Sky mutambo pa openSUSE?
5 Maitiro ekuisa Endless Sky mutambo paLinux?
Maitiro ekuisa Endless Sky mutambo pane Debian, Ubuntu uye zvavanotora?
Kugona kuisa uyu mutambo muUbuntu uye maherivhi ayo zvakapusa isu tichavimba nedura kuti tiiwane.
Zvatichaita kuvhura terminal ine Ctrl + Alt + T uye ita unotevera kuraira mairi:
Kana izvi zvaitwa, isu tichaenderera mberi nekuvandudza iyo runyorwa rwe mapakeji uye zvinyorwa:
Uye pakupedzisira tinogona kuisa mutambo pane yedu system ne:
Kune avo vari vashandisi veDebian kana kubva kuvashandisi vasingade kuwedzera dura kuUbuntu kana chero chinobva pazviri, tinogona kusarudza kushandisa chero epakeji yedhibhodhi, iyo inogarwa munzvimbo yambotaurwa.
Isu tinongofanirwa kuenda kune izvi totsvaga mafaera madhi anoenderana nekuvakwa kwesystem yatinayo.
Saizvozvowo tinogona kudhawunirodha mapakeji azvino kwazvo panguva yebhuku rino nemirairo inotevera.
Kana vari 64-bit system vashandisi ivo vanofanirwa kuita zvinotevera mune chinouraya:
Yenyaya yeavo vari 32-bit system vashandisi ita zvinotevera:
Zvino shandisa mutambo wacho nemirairo inotevera:
Maitiro ekuisa Endless Sky mutambo pane Fedora uye zvigadzirwa?
Uyu mutambo unogona kuiwana yakananga mukati meFedora repositoriesZvese iwe zvunofanirwa kuita kuvhura yako software nzvimbo uye tsvaga zita racho mariri.
Neimwe nzira iwe unogona kuita yakananga kuisirwa kubva kumagumo ehurongwa nekuita unotevera kuraira mairi:
Maitiro ekuisa Endless Sky mutambo paArch Linux uye zvigadzirwa?
Muchiitiko cheavo vari vashandisi veArch Linux, Manjaro, Antergos kana chero sisitimu yakatorwa kubva kuArch Linux, ivo vanofanirwa kuve neAUR repository yakavhurwa uye mubatsiri akaiswa.
Iye zvino ivo vanofanirwa kuvhura terminal pane avo masystem uye voita unotevera kuraira kumisikidza mutambo (mune uyu muenzaniso ini ndiri kushandisa iyo AUR wizard 'yay')
Maitiro ekuisa Endless Sky mutambo pa openSUSE?
Chekupedzisira, kune avo vanoshandisa chero vhezheni ye openSUSE, vanogona kumisikidza mutambo zvakananga kubva kumagumo ne:
Maitiro ekuisa Endless Sky mutambo paLinux?
Kazhinji kweinenge chero yazvino Linux kugovera isu tine dzimwe nzira mbiri ayo ari kuburikidza neSteam uye Flatpak mapakeji.
Kune avo vaverengi vanosarudza kugadzira kuisa mutambo kuburikidza neSteam, ingova nemutengi akaiswa pane ino sisitimu uye nekutsvaga mutambo mukati memutengi.
Nenzira imwecheteyo Ini ndinokusiya iwe uchibatanidza kupi vanogona kuiwedzera mahara kuraibhurari yavo yemitambo.
Pakupedzisira, kune avo vanosarudza kuisa neFlatpak ivo vanofanirwa chete kuita anotevera kuraira mune terminal:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Chisingaperi Denga rakakura multiplatform nzvimbo yekurwira mutambo
Pane nzira here yekududzira mutambo?